DAAWO: Nabadoon ah oo M/weyne Deni u sheegay war halis badan, Wasiiraddana ku sifeeyey kuwa been sheeg ah.
BOOSAASO(P-TIMES) – Kulan toos ah oo shalay ka dhacay Goobta dalxiiska ee Biya Kulule una dhaxeeyay Madaxwaynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo Bulshada Boosaaso ayaa looga hadlay arimo badan oo ay kamid yihiin tabashada Bulshada Bari ee ay ka qabaan Xukuumadda Puntland.
Hadalo kaftan ah oo ay madasha kasoo jeediyeen waxgaradka ayay si dadban u sheegeen inaysan ogolaan doonin in la iibsado hantidooda maguurtada ah gaar ahaan Garoonka iyo Dekkada oo tuhun badan ay ka qabeen in laga iibiyay Dowladda Imaaraatka.
Dadkii ka hadlay madasha waxaa kamid ahaa Cabdi Ugaas waxa uu sheegay in bulshada Boosaaso ay qabaan shaki badan waxaana shakigaasi uu sheegay in ay shacabka ka maqleen Wasiiro iyo Xildhibaano katirsan Dowladda.
Xubno masuuliyiin ah oo kusugnaa madasha ayuu sheegay in ay been kudhex faafiyeen bulshada dhexdeeda taasina ay keentay in dadka reer bariga ah ay shaki ka qaadaan dowladda iyo qorshaheeda garoonka Diyaaradaha Boosaaso.